Raawa Altaweli weli ma rumeysna inay Sucuudiga gaari ku kaxaynayso - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Raawa Altaweli weli ma rumeysna inay Sucuudiga gaari ku kaxaynayso
Raawa Altaweli weli ma rumeysna inay Sucuudiga gaari ku kaxaynayso. Halkan waxaan idiinku soo gudbinaynaa farxada haweenay xaasley ah oo markii ugu horeysay gaari shidhka hore u fadhida oo rumeysan la inay iyadu wado.
”Weligey kursigeygu wuxuu ahaa xagga dambe kumana fikirin inaan noqon doono wade gaari maantase wey dhacdey waxkastana mar uun bey isbedelaan ayay tiri Raawa Altaweli.
Waqti hore ayaan kacay maanta oo aan caadi ahayn, niyadeydu way kacsanayn si ficana uma seexan. Waxaa fadhiyaa kursiga gaariga laga wado waxaanan ahay wade mana ihi la wade, waxaanan ku socdaa shaqadii waa hadalkii Raawa.
Ma rumeyni inaan Jiddah keligey wadada saaranahay weliba afku ii xirneyn aanan xiranahay dhar anigu jeclahay oo aan ahayn cabaayad madow.
Waxa i ag fadhiya aabahay oo isaga laftiisu ila qaba farxada niyadana ii dhisaya. Waxaan wadada ku soo maray booliis laakiin baqdin iguma jirto in la i joojiyo waayo waxaan leehay laysan waxaanan ku socdaa sharci.
Waxaan joogsaday goob bunka laga cabo waxaanan noqdey qofkii ugu horeeyay ee haweena ee ninka iska leh goobtani uu bun ka gado.
Dareenka Raawa ayaa waxa la qaba haween badan oo xoriyad aan diintoodu ka qaadin hadda dib u helay.